Ibi úgwù - Rabbi Michael Avraham
Nzaghachi > Atiri: Nkà ihe ọmụma > Ibi úgwù
nwa nwoke Ajụrụ ya afọ 4 gara aga
Kedu ihe bụ ọnọdụ gị na arụmụka megide ibi úgwù? Na nwatakịrị ahụ bụ onye kwesịrị inwe nhọrọ ma ọ ga-eme ihe ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha n'ahụ ya ma ọ bụ na ọ gaghị eme ya, na njikọ ahụ na-etinye nwatakịrị ahụ n'ihe ize ndụ nakwa na n'ozuzu ọ dị ka igbutu ọnụ ara maka ụmụ agbọghọ (n'ihe gbasara arụmụka ahụike).
Arụmụka dị otú ahụ nwere ike megidere omume iri nri, agụmakwụkwọ na ihe ndị yiri ya. Enweghị ụzọ mgbapụ site na mmetụta nke ndị nne na nna na ndụ nwa ahụ. Ya mere ọ bụrụgodị na nkwupụta ahụ ziri ezi n'ụzọ doro anya, ọ dịghị mkpa. Ndị nne na nna kwesịrị ime ike ha niile dị ka okwukwe ha siri dị n'ebe ọ nọ. Karịsịa, mgbe o tolitere, mkpebi ime njikọ ga-ewute ya ma mee ka ọ na-esiri ya ike.
nwa nwoke Zara 4 afọ gara aga
Ma ọ bụ usoro a na-apụghị ịgbagha agbagha megidere nri nri na agụmakwụkwọ
mikyab123 Zara 4 afọ gara aga
Ọ bụghị eziokwu. Ihe niile enweghị ike ịgbanwe. Dịka ọmụmaatụ, agụmakwụkwọ na-ebuga ya n'ebe na-emetụtakwa mkpebi ma ọ ga-agbanwe ntụziaka.
Dr. Zara 4 afọ gara aga
Na agụmakwụkwọ, enwere ike ịsị na ọ na-agbanwe agbanwe mana nri na-edozi ahụ agaghị agbanwe agbanwe.
Daniel Zara 4 afọ gara aga
Ọzọkwa ibi úgwù mgbe ọ dị afọ 8 bụ mkpebi a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Ọ dịghị onye ga-enwe ike inyeghachi nwatakịrị a ụbọchị nwata ọ nọ na mpụga njikọ aka.
A Zara 4 afọ gara aga
Gịnị kpatara na nke a bụ nanị okwu e nwere site na mgbapụ nke rabaị gaa n'okwu ahụ azịza adịghị ike ma ọ bụghị nke siri ike. Ọ dịtụ icheta mgbaghara ultra-Orthodox n'oge anyị.
ד Zara 4 afọ gara aga
A, n'ezie. Ma rịba ama na o dere "ọbụlagodi na usoro ziri ezi" na naanị mgbe ahụ kwuru na ọ dịghị ọzọ nhọrọ na ihe niile bụ irreversible, wdg. Mana azịza ya bụ na iwu ibi úgwù karịrị uru nnwere onwe nke nwa na-enweghị uche.
R. Zara 4 afọ gara aga
N'uche nke m, azịza ya siri ike na nke ziri ezi na ọ bụghị ịgbanahụ.
Paini Zara 3 afọ gara aga
N'iso isiokwu a, echere m na m ga-agbakwunye na enwere nsogbu ebe a n'etiti uru nnwere onwe mmadụ nwere n'ebe ụmụ ya nọ na ịdị ukwuu nke mmerụ ahụ nwatakịrị. Ọ bụrụ na ọ bụ mmerụ ahụ buru ibu (dị ka igbupụ ụkwụ ma ọ bụ ogwe aka) a ga-enwe ohere iji mmanye gbochie omume a site n'aka ndị na-ekwenyeghị na ya (dị ka ịmanye mmadụ ka ọ ghara igbu onwe ya n'agbanyeghị na o meela. nnwere onwe n'ahụ ya). Ma n’ihe banyere ibi úgwù, ihe ọjọọ ọ na-akpata dị ntakịrị ma ọ̀ na-abara ndị nne na nna aka ịna-ekpebiri onwe ha ihe karịrị ya (dị nnọọ ka a naghị amanye mmadụ ịkwụsị ise siga n’agbanyeghị na ọ na-emerụ onwe ya ahụ́). Ya mere, ọbụna ndị na-ekweghị na mkpa nke ibi úgwù, ekwesịghị ịgọnarị ndị kwere na ya. Kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsị mma, ndị mmadụ nwere ike ịkụziri ndị mmadụ n'udo megide omenala ndị a na-akpọ "omume ọjọọ".
Enwere ike ịbanye Illuminati?
Onye iro dara ogbenye ma ọ bụ onye iro bara ọgaranya?
Michi Gbanye Halkhah ọ bụ ọtụtụ?
Shemaya Gbanye Halkhah ọ bụ ọtụtụ?
EA Gbanye Halkhah ọ bụ ọtụtụ?